Rosia: Aleksandr Solzhenitsyn · Global Voices teny Malagasy
Rosia: Aleksandr Solzhenitsyn
Voadika ny 04 Aogositra 2008 8:55 GMT
Nodimandry tamin'ny faha-89 taonany i Aleksandr Solzhenitsyn, ilay nahazo ny loka Nobel momba ny haisoratra noho ny bokiny mitondra ny lohateny hoe The Gulag Archipelago, ny alahady (omaly) teo.
Efa manomboka azo tarafina any amin'ny bolongana miteny rosiana izao fahafatesan'i Solzhenitsyn izao ka indro atolotra anao lahatsoratra iray avy amin'ny mpandimby azy (RUS), soratry ny mpampiasa LJ markgrigorian:
Nodimandry i Solzhenitsyn
Tsy ampoizina mandrakariva ny vaovao tahaka itony. 89 taona izy.
Ho ahy manokana dia nanomboka tamin'ny lakozian'ny radio (no nahalalako an'i) Solzhenitsyn. Mihaino ny vakitenin'ny The Gulag Archipelago (Ny tangoronosin'ny Golàgy) ny raibeko isan-kerinandro rehefa hariva. Mba mihaino araka izay kely fantatro amin'ny soratry Solzhentsyn ihany koa aho, fa mahery dia mahery tokoa ny fitantarana mampitampim-bava avy amin'ny fijoroana vavolombelona avy amin'ny zavatra niainany sy ny sombim-piainana voalaza [tao aminy].
Mazava loatra fa tsy mbola nahalala ilay tantara efa nalaza tahaka ny [One Day in the Life of Ivan Denisovich na andro iray amin'ny fiainan'i Ivan Denisovich] sy [Novyi Mir gazetiboky haisoratra namoahan'i Solzhenitsyn voalohany indrindra ny tantara nosoratany tamin'ny Naovambira 1962], ary [Aleksandr Tvardovsky, tonian'ny Novyi Mir]…
Nandritra ny fotoana lava dia mpanoratra ny Tangoronosin'ny Golàgy ihany no hany nahalalako an'i Solzhenitsyn.
Vao maika moa nihanatanjaka izany fahatsapana izany rehefa nandany alina maromaro haka sary isaky ny takelaka ny Tangoronosy natonta tany Paris ny mpaka saripika Misha Kalantar ary teo no nahitako – fa tsy namakiako – antontan_tsary matevina avy amin'o boky io.
Namaky azy aho taty aoriana. Miverimberina, satria tsy mety ny mindrana boky “anatin'ny indray alina.” Ka ahoana moa no hitantanana ny mamaky azy ao antin'ny indray alina? Eny fa na dia haingam-pamaky aza aho, heniky ny fihetseham-po aho, voatery nametraka ny boky teo anila, maka aina, maka fotoana kely mialoha ny hitsorahana indray any amin'ny fitantarana ireo tranga mampihoron-koditra mitranga any amin'ny toby sovietika, milazalaza ny Rafitry famonoana olona.
Tamy avy eo ny [Cancer Ward na Fanjakan'ny homamiadana], sy [The First Circle na Faribolana voalohany].
Nankafiziko tokoa ny fomban-tsoratra sy ny fitohizan-drafitra taratra ao amin'ny lahatsorany, fomba fandrindran-tsoratra nialoha ny vanimpotoanan'ny sovietika, ny lantompeom-pitantarana misongadina ao amin'izay nosoratany.
Tamin'ny alalan'ny Indray andro amin'ny fiainan'i Ivan Denisovich sy Toera-malalaky Matryona kosa indray no nahalalan'ny mpamaky an'i Solzhenitsyn , fa famenon'izay efa novakiako sy fantatro kosa ireo amiko.
Fa nankaloiloy ahy avy hatrany kosa ny bokiny mitoondra ny lohateny hoe Ahoana no hanatsarana an'i Rosia. Tsy ekeko – ary tsy mbola zakako mandraka ity androany – ny fitiavan-tanindrazana mivelatra naborany tao amin'io lahatsoratra fohy io. Nefa tamin'ny 1990, ny fehezanteny voalohany – “Nitsaha-paneno ny lakolosin'ny Komonisima.” – dia tahaka ny haisoratra, fehy aritisitika tamin'izay nitranga. Izay nitranga farany.
Nandritra izany fotoana izany no nahalalako fa i Solzhenitsyn no solontenan'ny hetsika tia tanindrazana sovietika nisintaka. Ary izay no nampazava tamiko ny safidiko na taminy na [Andrei Sakharov], izay nitondra kosa ny faneva demaokiratika, ka nisafidianako an'i Sakharov.
[Ny Amontana sy ny zanak'omby] – namaky azy ity ho ohatry ny tolona tsy misy fifampiraharahana eo amin'olona iray manohitra ny Rafitra. Na dia misy fahabangana aza ity boky ity dia mora vakiana. Midika izany fa voasoratra tsara io.
[Ny Kodiarana Mena] indray dia tsy takatro mihitsy.
Tsy ahy mihitsy koa ny fironan'i Solzhenitsyn amin'ny [Kirisitiana Orthodox/tia tanindrazana]. [Aogositra 1914] indray dia tsapako ho fahaverezan'ny fitiavana haisoratra sy ny talentam-panoratana tao aminy.
Fa raha avela eo ankilany ny tsy fitiavako ny filozofiany sy ny fomba fanoratry Solzhenitsyn indraindray dia heveriko fa tena fahombiazana tanteraka kosa ny Tangoronosin'ny Golàgy. Raha tao anatin'ny tontolo Sovietika ve, niaretana ny fampahoriana sy ny sivana, na dia nisy aza ny fikarohana azy, ka mbola nahangonan'i Solzhenitsyn ny porofo mivaingana tokana, nandrindrany sy nampitany azy ho amin'ny endrika mampitolagaga ny fahazavan'izay nosoratany.
Tsy azo tsinontsinoavina mihitsy. Asa soratra goavana nyThe Archipelago (Ny Tangoro-nosy).
8 ora izayEoropa Afovoany & Atsinanana
06 Febroary 2021Azia Afovoany sy Kaokazy